Nanao ahoana ny sambofiaran'i Noa ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Nanao ahoana ny sambofiaran’i Noa
Nanao ahoana ny sambofiaran’i Noa. Ny sambofiaran’i Noa dia sambo lehibe iray vita amin’ny hazo kypreso ary norakofana tara. Afaka nitondra entana be dia be ilay sambofiara, ary afaka nanavotra ny fianakavian’i Noa sy ny karazam-biby rehetra tamin’ny Safodrano. Andriamanitra no nanome toromarika an’i Noa momba ny fanamboarana ny sambofiara.
Noho ny faharatsian’ny olona, Nanapa-kevitra ny handrava ny zavaboariny Andriamanitra. Fa nisy lehilahy tsara fanahy natahotra an'Andriamanitra: Noa. Noho izany, Andriamanitra dia nanome fahafahana ny olombelona ho amin’ny famonjena. Nasainy nanao sambofiara i Noa.
Izao isika dia handinika hoe nanao ahoana ny sambofiaran'i Noa:
1 Nanao ahoana ny sambofiaran’i Noa araka ny Baiboly
2 Aiza ny sambofiara ankehitriny?
Nanao ahoana ny sambofiaran’i Noa araka ny Baiboly
Tsy maintsy sambo lehibe tsy mampino ny sambofiara. Tokony hotadidintsika fa tokony hisy izany toerana hipetrahan’ny karazana biby roa isan-karazany ankoatra ny fianakavian’i Noa, noho izany dia nomen’ Andriamanitra azy ny toromarika ilaina. Ny habeny dia:
300 hakiho ny lavany (135 metatra eo ho eo).
50 hakiho ny sakany (22 metatra eo ho eo).
30 hakiho ny haavony (tokony ho 13,5 metatra).
El kiho dia fandrefesana tranainy izay mitovy amin'ny 45 santimetatra.
Nilaza tamin’i Noa Andriamanitra mba hanao ny sambofiara Madera de kypreso ary manarona azy pitch for anatiny sy ivelany mba tsy tantera-drano. Nisy a varavarana sisiny sy rihana telo, mba hipetrahana biby maro samy hafa habe. Ankoatra ny fanamboarana ny sambofiara, dia tsy maintsy nanao izany i Noa mitahiry ny karazan-tsakafo rehetra ho an'ny dia. Naharitra 100 taona teo ho eo io asa io.
Manaova sambo-fiara ho anao amin'ny hazo gofera; manaova efi-trano ao anaty fiara, ka petaho ny ainy sy ny atiny sy ny ivelany.
Ary izao no hanaovanao azy: telon-jato hakiho ny lavan'ny sambofiara, dimam-polo hakiho ny sakany, ary telo-polo hakiho ny hahavony.
Ary manamboatra varavarankely amin'ny fiara ianao, ary hamarana azy amin'ny haavon'ny iray hakiho avy eo ambony, ary ataovy eo akaikiny ny varavaran'ny fiara; ary hataonao rihana ambany sy faharoa sy fahatelo izy.
Genesisy 6: 14-16
Rehefa tonga ny andron’ny Safo-drano, Nandefa karazana biby tsiroaroa hiditra tao amin’ny sambofiara Andriamanitra. Ankoatra ny biby, dia nisy olona valo niditra tao amin'ny sambofiara: Noa sy ny vadiny sy ny zanany telo lahy ary ny vadin’ireo zanany. Tsy nisy olon-kafa nanandrana niditra. Avy eo, Nakaton’Andriamanitra ny varavaran’ny sambofiara y nanomboka ny Safodrano.
Ary izay tonga, lahy sy vavy, avy amin'ny nofo rehetra dia tonga, araka izay nandidian'Andriamanitra; ary Jehovah nakatony ny varavarana.
Rehefa nilamina ihany ny rano, dia nosokafan’i Noa ny varavarankelin’ny sambofiara ary nandefa vorona hijery azy. Rehefa hitany fa voavonjy aho Nesorin’i Noa ny tafon’ny sambofiara ka lasa izy rehetra.
Ary ny zava-nitranga, tamin’ ny taona fahiraika amby enin-jato nanjakan’ i Noa, tamin’ ny volana voalohany, tamin’ ny andro voalohan’ ny volana, dia ritra tambonin’ ny tany ny rano; Nesorin’i Noa ny sarony teo amin’ny sambofiara, dia nijery, ka, indro, maina ny tany.
Ary tamin'ny volana fahafito amby roa-polo tamin'ny volana faharoa dia maina ny tany.
Ary Andriamanitra niteny tamin'i Noa nanao hoe:
Mivoaha amin'ny sambo-fiara ianao sy ny vadinao sy ny zanakao ary ny vadin'ny zanakao miaraka aminao.
Genesisy 8: 13-16
Aiza ny sambofiara ankehitriny?
Tsy misy mahalala hoe aiza ny sambofiaran’i Noa, na mbola misy izy io. Milaza ny Baiboly fa ny sambofiara tonga tany amin’ny tendrombohitr’i Ararata. Misy dongona antsoina hoe Ararata any Torkia, nefa volkano mavitrika izy io ary hatramin’izao dia tsy mbola nisy nahita porofo momba ilay sambofiara. Mety ho teo amin’io havoana io na teo amin’ny havoana hafa tao amin’ilay faritra ilay sambofiara.
Ary nipetraka tamin'ny volana fahafito tamin'ny volana fahafito tamin'ny volana fahafito teo ambonin'ny tendrombohitra Ararata ny fiara.
Efa 5.000 XNUMX taona teo ho eo izay no nitrangan’ny Safodrano, araka ny Baiboly. Toy ny hazo vita amin'ny hazo ny sambofiara, izay harafesina Tsy azo inoana fa misy ny soritr'aretiny ankehitriny izay azo fantarina.
Manantena izahay fa azonao izao nanao ahoana ny fiara. Raha te hanohy hianatra tantara ao amin'ny Baiboly ianao, dia mamporisika anao izahay hanohy hikaroka Discover.online ary hamaky ny lahatsoratra momba ny inona ireo loza 10 tany Ejipta.
Ahoana ny fomba hahafaly ny mpitovo
Inona ireo loza 10 tany Ejipta